Cool Retro Term, emulator terminal ho an'ny nostalgia indrindra | Ubunlog
Cool Retro Term, emulator terminal ho an'ny nostalgia be indrindra
Sergio Acute | | Software
Iza teto no nampiasa solosaina nandritra ny taona 80? Tsy miresaka momba ny Spectrum, ny MSX, ny Amiga na ny Commodore isika - izay tena mahaliana ihany koa, saingy izao dia tsy misy ifandraisany intsony. Miresaka ireo maodely voalohany an'ny Apple na PC voalohany misy MS-DOS izahay. Raha iray amin'ireo mpampiasa ireo ianao ary malahelo ireo fotoana ireo, dia Cool Retro Term dia ho anao.
Cool Retro Term dia emulator terminal izay manahaka ny fijerin'ny mpanara-maso ray cathode taloha, ary inona no mety ho solony vatomamy-maso amin'ny emulateur fisaka nefa mahomby, toa an'i Tilda na Terminator. Tsy azo lavina fa, farafaharatsiny, manintona ny mijery azy, ary mahafinaritra be ny mampiasa azy.
Ny iray amin'ireo mampiavaka ny Cool Retro Term izay mahaliana azy dia ny an'ny afaka manamboatra azy araka ny tadiavintsikaNy iray hafa dia maivana ihany ary tokony hiasa tsara amin'ny rig voafetra. Ary koa, namboarina tamin'ny alàlan'ny motera Konsole, emulator KDE, izay efa veterana sy matanjaka be. Ny maha-karazana sotro rovitra I Konsole dia mitaky Qt 5.2 na avo kokoa hiasa.
Ho an'ireo izay tsy te handany fotoana amin'ny fametrahana ny zavatra rehetra ho azy, Cool Retro Term misy ny famaritana namboarina efa voafaritra izay azo alefa amin'ny tsindry iray monja. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny profil samihafa, dia ny Amber, Green, Scanlines, Pixelated, Apple] [, Vintage, IBM Dos, IBM 3287, ary Transparent Green. Mazava ho azy, azonao atao ny mamaritra ny anao.
Ny safidinao koa manolora saha fametrahana: azonao atao ny manova ny famirapiratana, ny fifanoherana, ny opacity, ny endritsoratra, ny haben'ny endri-tsoratra ary ny sakany, mamaritra ny vokatr'ilay maso ho an'ny terminal, fehezo ny FPS, ny kalitaon'ny firafitra ary ny scan lines ary maro hafa. Manana safidy ampy izy io hahafahanao mamela ny programa tonga lafatra araka ny itiavanao azy.
Raha tianao izany mametraka Cool Retro Term ampidiro ao anaty terminal ireo baiko avelanay anao eto ambany:
Raha sahy manandrana ianao dia aza misalasala mamela anay hanome hevitra momba ny zavatra niainanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Cool Retro Term, emulator terminal ho an'ny nostalgia be indrindra
leopoldo.m.jimenez.raya dia hoy izy:
Mahafinaritra ny miasa mandritra ny "fotoana kelikely" fa tsy rehefa mila manao zavatra be dia be ianao. Manoro hevitra aho ny hametrahan'ny olona taona vitsivitsy toa ahy.
Mamaly an'i leopoldo.m.jimenez.raya
Ahoana ny fomba hahalala hoe iza amin'ny kinova Ubuntu no ampiasainay
Ubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus dia efa manana daty famotsorana ofisialy